Portfolio interior design modern houses - Interior design classic villas Bucharest - Nobili Interior Design, studio, architect, designer, companies, design, prices
Interior magadzirirwo zvirongwa kuti vawane dzimba vaviri, dzimba uyewo Apartments, munogara customized dzinoratidza mararamiro avo, zvaunofarira uye zvinodiwa nemhuri imwe neimwe. Kugadzirisa nekugadzirisa nzvimbo yehupenyu humwe chikamu chezvinhu zvinokosha zvemukati wekugadzira basa. Tinopa 3 D mhinduro uye zvigadziriswa zvakaitwa kumatunhu akakwirira uye nepamusoro-soro yezvinhu uye zvigadzirwa. Projects kubva Portfolio kwedu mukati magadzirirwo misha, umbozha dzimba kwakaitwa chaiwo werudzii pamwe ano mukati design turnkey mabasa muna Constanta, muBucharest, Ploiesti, Brasov, Galati.
1 peji mu 7
Portfolio mapurisa mukati mekugadzirwa kwemazuva ano maimba edzimba
kambani Nobili Interior Design yatanga kugadzira mapinduriro evanhu mukati mekugadzirwa kwemagariro edzimba dzepamusoro uye dzimba dzekugara kubva ku2008. Kwatiri, izvi hazvina kungova basa chete, asi chikamu chinokosha chehupenyu. Chiitiko chedu uye hukuru hwezveruzivo rwakatipa mukana wekuve umwe wezvinyanya kuzivikanwa uye zvakakura mukati mekugadzira studio muRomania. Chimwe chezvinhu zvemukati zvekugadzirwa kwemapurogiramu zvakasiyana uye zvakasikwa zvakananga zvichifunga nezvekunze nekunze kwekuvakwa kweimba uye zvinodiwa nevatengi. Kusvika ikozvino, tabudirira kubudirira pamusoro pezvirongwa zve150 mukati mukati mekugadzirira dzimba dzekare atiki, dzimba ne pasi uye kwerinenge 100 chirongwa utariri basa tinopa chokuendesa zvokuvakisa zvokunyaradza kugadzira. chikwata chedu anogona kushandisa zvose zvinobvira zvinhu uye ruzivo, magadzirirwo zvose zvaitarisirwa kubva chekare, Baroque, itsva dzenhoroondo kuna Mediterranean ano kana Air kuti munhu zvichienderana musha mararamiro. Kana uchironga kutenga imwe zvokunyaradza kugadzira chirongwa, chipo Portfolio mabasa chinoitirwa boka redu rinogona kukubatsira kusarudza kupfuura kukodzera manyorerwo imba yako kana mufurati. Classic hwokusanyara nedzimba atiki nedzimba pauriri Mediterranean werudzii ano dzimba, tinoshanda nezvirwere zvose zvivako munyika, kusanganisira muBucharest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea uye Galati.
Portfolio of interior design modern houses - Interior design classical villas Bucharest - Nobili Interior Design